Tiro-koob ballaadhan oo Shiinaha API 602 Faallooyin Been Abuur Ah
Shirkadda Newsway Valve Company waa shirkad soosaarayaal xirfadlayaal ah oo soo saarta API 602 Faallooyinka Faallooyinka Been Abuurka ah, waxaan soo saari karnaa 40000 nooc API 602 Faallooyin Faallooyin Faallooyin ah oo Bille ah. Newsway Valve waxay leedahay agab balaaran oo filfado ah si ay ugu fududaato macaamiisha inay keenaan waqti kasta. Magaca Product: Been abuur Steel Glob ...
Qaabka wax u sameynta iyo sharaxaadda waxqabadka xirxirida waalka
1. Sharaxaada nooca xirxirida Graphite Waxaa jira 3 nooc ee soo buuxiyeyaasha ah ee sida caadiga ah loogu isticmaalo filtarka xirxirida loo isticmaalay mashruucan waa nooca hal-furitaanka ee Jaantuska 1 iyo xirmaynta giraan u eg qaabka Jaantuska 3. Sawirada dhabta ah waa sida soo socota: Jaantus 1 Nooca kaliya ee furitaanka xirxirida Fi ...
Habka keydinta ee xirxirida waalka: Buuxiyeyaasha mashruucan inta badan waxay ka kooban yihiin labada shay ee soo socda: PTFE iyo garaafka jilicsan. Markaad keydiso, ku xir bac ama sanduuq. Si fiican ugu keydi bakhaar qalalan oo hawo leh, iska ilaali iftiinka qoraxda. Feejignow hawo inta lagu jiro keydinta muddada-dheer, iyo contr ...
Nidaamka gudbinta dareeraha, waalka waa qeyb xakamayn lama huraan ah, oo inta badan leh shaqooyinka qawaaniinta, leexinta, kahortaga dib u soo noqoshada, jarista iyo shuntka. Waalka ayaa si weyn loogu adeegsadaa dhinacyada warshadaha iyo bulshada. Waalka heerkulka sare waa nooc inta badan lagu isticmaalo filtarka. Qeexitaankiisa ...
Baalalka korontada ku shaqeeya wuxuu leeyahay tallaabada wareejinta 90 digrii. Jirka diiqu waa meere wareegsan oo dalool ama kanaal maraya dhidibkiisa. Ballalka kubbadda waxaa badanaa loo isticmaalaa dhuunta sida waalka korantada korontada si loo jaro, loo qaybiyo loona beddelo jihada socodka dhexdhexaadka. Waa ...
Shirkadda 'Newsway Valve company' ee heerkulka sare ee gaaska kubbadda waa qaab dhismeedka shaabadda birta, foomka wax lagu xidho waa bir birta loo xidhayo, giraan bir ah oo lagu xidho birta waa la is-weydaarsan karaa, saxanka birta ah ee birta ah iyo giraanta saxanka farcan isku-dhafan ee giraanta isku xidha birta. Wadista korantada waxaa usii dheer, balanbaalis adag-xiran ...
Saddexda rubuc ee hore ee 2016, dhaqaalaha qaranku wuxuu sii waday inuu si dhakhso leh u kobco, iyada oo kororka waxsoosaarka GDP ee 11.5%, taas oo siisay suuqa waalka kubbadda isbeddel wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka kuleylka dhaqaalaha ayaa sii socda, waxaana jira dhibaatooyin xoog leh oo laga yaabo inay dhaqaalaha u rogaan kuleyl ...
Tilmaamaha iibsiga ahama ee 316 ahama
Shirkadda 'Newsway Valve Company' 316 ee birta biraha ah ee birta ah waxay leedahay laba qaybood iyo saddex qaybood oo ah qaababka jirka ee waalka. Flange-ka dhexe wuxuu kuxiran yahay boolillo shaabaduna waxay ka sameysan tahay daawaha nikkel ku saleysan. Ma jiraan wax dhejis ah oo loo yaqaan 'PTFE' oo ku yaal galka sare iyo hoose ee jirridaha, yaraynta khilaafaadka iyo opera badbaadinta shaqada ...
Isbedelka Suuqa Flange Gate Valve
Warbixintan oo loogu magac daray "Global Flange Gate Valve Market" waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhameystiran uguna muhiimsan ee lagu daro keydka cilmi baarista suuqa ee NSW Research. Waxay bixisaa cilmi-baaris iyo falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan dhinacyada muhiimka ah ee suuqa waalka albaabka flanged. Falanqeeyaha suuqa ee wro ...
API 602 GLOBE VALVE Newsway Valve Company API 602 globe valves waxay leeyihiin saddex naqshadood oo guntin ah. Midka hore waa nooc boolal ah, oo ay ku xiran yihiin sagxad iyo sagxad dusha sare leh, iyadoo la adeegsanayo suumanka birta ah ee birta ka sameysan iyo jaakadaha jilicsan ee dhaawaca ah. Xiriirinta giraan sidoo kale waa loo isticmaali karaa sidii loogu baahdo. The ...
Qalabka Dahaarka ee Birta ahaanta ah Qaybta furitaanka iyo xiridda ee waalka biraha birta ah ee birta ah waa albaabka, jihada dhaqdhaqaaqa ee albaabkuna wuxuu ku toosan yahay jihada dareeraha. Albaabka birta ahama wuxuu leeyahay laba dusha sare. Labada dusha sare ee shaabadaynta qaabka ugu badan ee la isticmaalo ...
Faahfaahin iyo falanqeyn ku saabsan qalabka wax lagu buufiyo
Baalalka gacanta, baalka balanbaalka iyo waalka furaha waa isla nooca waalka. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in qeybta xirmidda waalka kubbadu uu yahay kubad, taas oo ku wareegeysa hareeraha khadka dhexe ee jirka waalka si loo gaaro furitaanka iyo xiritaanka. Baalalka kubbadda waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu jaro, loo qaybiyo loona beddelo ...
Hantida weyn ee Shiinaha API 602 been abuur ah S ...
Qaabka wax u sameynta iyo waxqabadka ...